Mexican Caribbean inopemberera gore rimwe rekuvhurwa zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mexico Kuputsa Nhau » Mexican Caribbean inopemberera gore rimwe rekuvhurwa zvakare
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Caribbean • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iine migwagwa makumi mana nemaviri kubva kuUnited States, kubatana kwemhepo neEurope kubva kuGerman, France, Spain, Great Britain, Portugal, Russia, Poland, Turkey, ndege kubva kuLatin America senge kuBelize, Colombia, Brazil, Costa Rica, Panama, Peru, Dominican Republic neVenezuela, kuwedzera kune nendege dzinoenda kunhandare nhatu dzeQuintana Roo, muCancun, Cozumel neChetumal, iyo Mexican Caribbean nhasi yakafanana nesimba uye nekubudirira kwekushanya kwekushanya.
Kubatana kwemhepo, zvimwe zvivakwa zvehotera, uye mabhizinesi akavhurika mhedzisiro yekudzoka kwekushanya kwekushanya.
Chikamu chakazvimiririra uye kuedza kwehurumende zvaive zvakakosha kuti vavhurezve nzvimbo
Idzo nzvimbo dzakachengeterwa Kiyi Hutano Kudzivirira MaProtocol ekudzoka kwakachengeteka
Svondo rino maCaribbean eMexico anopemberera gore rimwe chete rekuvhurwa kutashanyi mushure medambudziko rehutano rakakonzerwa nehutachiona hweSARS-CoV-2 hwakamanikidza kumira pachikamu chikuru chezviitiko pasi rese, kushanya kuchisanganisira.
MunaJune 2020, iyo Cancun International Airport yakanyoreswa chete makumi matatu nemasere mashandiro, ayo gumi nematanhatu akasvika: gumi nemaviri emunyika uye mana epasi rose (32 Chikumi). Nekudaro, gore rakatevera, pane rekodhi yemabasa makumi mana nemakumi manomwe, ayo makumi maviri nemakumi maviri nevashanu vanosvika: 16 yenyika uye 12 nyika dzepasi rose (Chikumi 4).
Nezve kugara kwehotera, paive neavhareji ye2.5% muRiviera Maya muna Chivabvu 2020, uye 5.69% muCancun nePuerto Morelos Hotel Zone panguva imwecheteyo. Muna Chivabvu 2021, iyo Riviera Maya inoshuma avhareji ye53.3% yekugara muhotera uye Cancun, Puerto Morelos, uye Isla Mujeres vakashuma avhareji ye58%.
Mexican Caribbean Yakachena & Yakachengeteka Cheti Certification (CPPSIT), yakagadziriswa neQuintana Roo Tourism Secretariat, yakabvumidza makambani evashanyi kugadzirisa matanho anodiwa anosanganisira shanduko mutsika dzehutsanana sekumwa doro redoro uye kushandiswa kwemeso kumeso uye zvemagariro. kuremedza, kudzikisa njodzi yekupararira kwehutachiona pakati pevanhu, kuwedzera kune State Epidemiological Traffic Mwenje iyo inosarudza kugona kubvumidzwa nebasa uye chikamu. Izvi zviito, zvakatorwa nehurumende yeQuintana Roo uye zvakaitwa nemasangano akazvimirira uye vagari, pamwe nekuzivisa kwekushanya sechinhu chakakosha naGavhuna Carlos Joaquín, zvakabvumidzwa nzvimbo dzekuMexico dzeCaribbean kuti dzitange kugamuchira vashanyi muna Chikumi 2020 .
"Gore rapfuura, uye kugutsikana kukuru kupupura kuti kuyedza kwakabatana kwevanamuzvinabhizinesi, vashandi, uye hurumende kwakakonzera kudzokororwa kukuru kwekushanya uko nyika yeQuintana Roo yakasangana nako," akadaro Darío Flota Ocampo, director director yeQuintana Roo Tourism Board (QRTB).
Nechikamu chayo, QRTB yakashandisa nzira dzekukurudzira kushanya kuburikidza neMexicoan Caribbean mushandirapamwe "Izvo Zvakanakisa zveMaviri Nyika", iyo yakagadzira zviito chaizvo zvezvikamu zvezvivakwa zvezororo, gorofu, hutano uye misangano kushanya. Pamusoro pemasemina chaiwo ane vamiriri vekufambisa kubva muna Chivabvu kusvika Zvita 2020 uye kusvika parizvino gore rino, pamwe nemisangano nevamiriri vendege, vashanyi vekushanya, kutora chikamu mumitambo chaiyo uye kuyedza kwakati wandei kwakanangana nekusimudzira nzvimbo dzeMexicoan Caribbean pasi rese.
Zvinoenderana neruzivo kubva kuStategic Planning Directorate yeQRTB, mugore kubva kutanga kwekushanya kwekumutsidzira, vanopfuura mamirioni manomwe vatakuri vakashanyira Quintana Roo uye, nekuda kwemaitiro, zviito uye matanho akaitwa panguva yekudzoserwa kwekushanya. zvinokwanisika kufungidzira kusvika kwevamwe mamirioni matanhatu vafambi mumwedzi mitanhatu inotevera ye7.